Taorian’ny fiarahabana fanao mahazatra, miantefa amin’ireo olo-manan-kaja tonga nanatrika sy ny vahoaka malagasy rehetra, dia nampahatsiaro sahady ny Ray Masina fa ao anatin’ny savaranonandon’ny Lalàmpanorenana Malagasy ny “Fihavanana”, izay soatoavina isehoan’ny fanahy maha malagasy, ahafahana manohitra ny olana atrehina isan’andro. Notsipihiny fa ny politika dia fitaovana fototra enti-manandratra ny maha-olom-pirenena sy ireo vina momba ny olombelona. Ny asa sy ny andraikitra politika dia miteraka fanamby maharitra ho an’ireo izay nomena ny iraka. Ny tompon’andraikitra ara-politika dia tokony hanamora ny fivoarana mendrika sy marina ary mampirisika an’ireo mpisehatra rehetra mba handray andraikitra koa. Nomarihin’ny Papa fa tsy misy krizy roa misaraka izany fa tsy maintsy miaraka mifamahofaho ny krizy ara-tsosialy sy ny krizin’ny tontolo iainana ka zava-dehibe ny mamorona asa fihariana hahazoam-bola, izay manaja ny tontolo iainana. Fankaherezana kosa no nentin’ny Papa ho an’ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy iray manontolo, momba ny ady amin’ny kolikoly. Mampitombo ny fahasamihafana ara-tsosialy mantsy ny areti-maharitry ny kolikoly, hoy izy. Raha fehezina dia niompana tamin ny fitsinjovana ny maha olombelona sy ny tontolo ara-boajanahary, ny fihavanana ary ny ady amin’ny kolikoly ny lahatenin’ny Ray Masina Fransoa. Ny fomba fitantanana an’ireo rehetra ireo dia tokony hipaka amin’ny fiainam-bahoaka. Nilaza koa izy fa tokony hohenoina ireo mpisintona lakolosy, toy ny firaisamonim-pirenena, ny fiangonana ary ireo mpiantsehatra maro samihafa.